🥇 ▷ Imaatinka Mario Kart Tour ee casriga casriga ah ee loo yaqaan 'telefoonada gacanta' ee macruufka Android iyo macruufka ✅
Imaatinka Mario Kart Tour ee casriga casriga ah ee loo yaqaan ‘telefoonada gacanta’ ee macruufka Android iyo macruufka
Mario Kart Tour wuxuu mowduuca kaftanka Mario Kart u rakibay aaladaha mobilada ee wata Android iyo iOS, qeyb cusub oo ah in saacadihii hore ay la soo derseen dhibaatooyin ku saabsan adeegayaasha, taas oo ka hor istaagtay isticmaaleyaal badan inay galaan ciyaarta.
Cinwaanka cusub ee ‘Nintendo’ waxaa loo sameeyay ‘casriga’: Mario Kart Tour wuxuu ka shaqeeyaa dhaqdhaqaaqa farta si uu u dardar geliyo oo uu u wareego, wuxuuna leeyahay wareegyo kala duwan, kuwaas oo qaarkood dhiirrigeliya goobaha dhabta ah.
Muxuu yahay Mario Kart Tour?
Maanta oo ay tahay Sebtember 25 ayaa timid Safarka Mario Kart, Ciyaartii ugu dambeysay ee Nintendo oo loogu talagalay aaladda macruufka iyo aaladda Android, waxay isu diyaarineysaa inay xawaareyso oo ay ku gubto dambas taleefannada gacanta ee ciyaartooyda adduunka. Ciyaartan cusub ee Mario Kart wuxuu ka sii gudbayaa Wadada Rainbow waxaana ku jira wareegyo gaar ah oo magaalada ah, oo kuu oggolaanaya inaad ku tartameyso goobaha dhabta ah sida New York, Tokyo iyo Paris. Waxaad kala soo bixi kartaa Mario Kart Tour iyada oo loo marayo AppStore Y Dukaanka Google Play.
Iyada oo la adeegsanayo Mario Kart Tour, ciyaartoy ka kala yimid adduunka oo idil ayaa awoodi doona inay la kulmaan madadaalo aan dhammaad lahayn oo ku saabsan tartamada Mario Kart halka ay u ururinayaan darawalada, sida Mario, iyo sidoo kale gawaarida iyo baalal ay ku safri karaan wareegyo balaaran oo kala duwan. Taageerayaasha tartamada Mario Kart sidoo kale waxay ogaan doonaan waxyaabo la yaab leh, sida noocyo cusub oo ka mid ah wareegyada qadiimka ah ama wareegga gaarka ah ee magaalada, kuwaas oo la heli doono inta lagu guda jiro taariikho gaar ah oo ay dhiirigelin doonto goobaha dhabta ah. Oo halkaas waxyaabaha la yaab leh ma dhamaan doonaan! Qaar ka mid ah jilayaasha Mario Kart ayaa waliba xiran doona dharyo cajiib ah si ay u qooyaan dhadhanka maxalliga ah ee magaalooyinka ay booqdaan.
Mid ka mid ah waxyaabaha soo jiidashada leh ee ciyaartan ayaa ah suurtagalnimada ay ku bixin karto inay la tartamaan ciyaartoy ka kala yimid adduunka oo dhan iyo isbarbar dhiga booska kaalinta. Waxaa ku jira tilmaamo, walxo iyo jilayaal caan ah oo ka mid ah taraafikada, in kasta oo ay sidoo kale ogaan doonaan wareegyo cusub iyo waxyaabo gaar ah oo gaar u ah wadewalwalba, sida mashiinka dayuuradda Diddy Kong ama qumbaha likaha turbo ee Peachette.
Si kastaba ha noqotee, iyo iyada oo la raacayo cabashooyinka ay muujiyeen qaar ka mid ah isticmaaleyaasha shabakadaha rasmiga ah ee ciyaarta-sida Facebook ama Twitter-, ciyaartoy badan ayaa la kulmay saamiyo buuxa, taas oo ka horjoogsatay ciyaarta in ay xirato.
Burburku wuxuu daba socdaa filasho uu abuuray cinwaanka, oo ka tirsan mid ka mid ah kuwa ugu caansan Nintendo franchises, kaas oo Talaadadii lagu daabacay dukaamada app ee rasmiga ah ka dib moodal ah ‘bilow-bilaw’. AppStore Y Dukaanka Google Play.
Isticmaalayaasha ayaa sameyn kara, iyagoo raacaya qaabka ‘bilow-bilawga ah’, ku soo dejisan kara ciyaarta si bilaash ah kuna rakibi qalabkooda Android iyo macruufka. Ku ciyaarista cinwaanka, markii hore, sidoo kale waa lacag la’aan, in kasta oo aad gaadho meel cayiman waxaad u baahan doontaa lacag bixin si aad u sii wadato.
Waxay ku celin doonaan guusha ciyaaraha sida Pokemon Go. Isticmaalayaashu waxay bixin doonaan lacag si ay u sii wadaan ciyaarta. Waqtigu wuu sheegi doonaa laakiin waxay u egtahay mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan Nintendo